QM oo soo dhoweysay wadahadalada dowladda iyo mucaaradka Baxreyn – SBC
QM oo soo dhoweysay wadahadalada dowladda iyo mucaaradka Baxreyn
Manama:- Xoghayaha guud ee QM Baan Kii Muun ayaa soo dhoweeyey wadahadalada qaran ee dowladda Baxreyn la bilowday mucaaradka dalkaas si looga gaaro xal siyaasadeed dhibaatooyinka gudaha ee kadhashay cabashooyinkii ugu dambeeyey ee looga soo horjeeday xukuumadda Baxreyn.
Mr Muun ayaa ku booriyey maamulka Baxreyn in la qaado talaabooyin dheeraad ah si loo fuliyo xeerarka caalmiga ee la xiriira xuquuqda aadanaha .
Hadalka xoghayaha guud ee QM ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Baxreyn ay furtay wadahadalo ay ka qeyb galayaan lixdan qof oo matalaya jamciyaadka siyaasadda, ururada bulshada rayidka, ururada shaqaalaha iyo afar wasiir oo xukuumadda ka scoda.
Labada dhinac ayaa kulankooda uga hadlay qodobo ay kamid yihiin xoojinta wadahadalada , arrimaha xuquuqda haweenka iyo caruurta iyo arrimaha mustaqbalka dhalinyarada.
Sidoo kale dhinacyada kulanka ka qeyb galaya ayaa isku waafaqay in kulan ay isugu yimaadaan toddobaadkii saddex maalmood oo kala ah Axad, Talaado iyo Khamiis saacadaha shanta ilamaa sagaalka habeenimo.
Dhanka kale Jamciyada Al-wafaaq ee mucaaradka ah ayaa go’aansatay in ay ka qeyb gasho kulankaan islamarkaana ay diyaar u tahay in ay ka baxdo kulanka haddii ay fashilmaan howlaha lagu raadinayo dib u habayn iyo mideynta shacabka Baxreyn.
Hay’adda u dooda xuquuqda aadanaha Human Rights watch ayaa ku eedeysay Baxreyn in ay wado olole ay ku caburinayso muwaadiniinteeda ka hor yimid maamulka tan iyo markii ay rabsahdaha ka bilowdeen dalkaas bishii Maarso ee la soo dhaafay.